Maalin: Janaayo 6, 2019
Wareegga Hawlgabka ee Isgaadhsiinta Isgaadhsiinta İzmir
İZBAN, METRO iyo xiisadda TRAMVAY ee İzmir ayaa sii socota. Maareeyaha guud ee Izmir Metro Sönmez Alev ayaa iska casilay shaqadiisa. Isagoo ku sifeynaya iscasilaadiisa shaqaalaha Flame, fasax ayaa aheyd. Shaqaalaha IZBAN waxay shaqo joojin iyo shaqo joojin ka bilaabaan Metro [More ...]
Wasiirka Turhan: Ma jiraan wax khasaare ah oo ku yimid TCDD ee shilalka tareenka Bakan
CHP'li Ozgur Ozel Ozel Ozel jawaabtii su'aasha, Shilkii 8 ee dhimashada ayaa lagu dhammeystirey baaritaanka qulqulka '4 shilalka TCDD'nin cillad malaha. Kuxigeenka madaxa kooxda CHP Ozgur Ozel su'aasha ku saabsan shilalka tareenka ee dilaaga ah [More ...]
Kulanka finalka ee FIS wuxuu ku dhamaaday Gerede
Barnaamijka Ski Federation International Turkey Ski Cross 2019 Activity ku yaalla ee tartamada oo FIS Cup dhamaaday magaalada Bolu Gerede. Maalintii ugu dambeysay tartamada oo laga abaabulay Xarunta Arkut Skiing Center ee Gerede, haweenka [More ...]
Dhismaha Dhismaha Isbeddelka Qalabka Korontada ee Samsun Bold Line 105 + 300
TCDD 4 Agaasime Goboleed Samsun Thick Line Pedestrian overpass Dhismaha 105 + 300 TCDD kaas oo leh qiime ku dhow 4 / 2018 GCC nambarada 644459 / 713.235,32 TL of XNUMX Agaasime Goboleedka XNUMX (TCDD) ee Wadada Tareenka ee Gobolka Turkiga [More ...]
'Khariidadda' OSB 'ee Khariidadda Waddada oo dhameystiran
Wasiirka Warshadaha iyo Technology Mustafa Varank, "Kor Green OSB, waxaan bilaabay Framework ee Project Turkey. Qorshayaasha waxqabadka ayaa loo diyaariyay OIZs tijaabada ah. Intaa waxaa sii dheer, iyada oo ah dukumiinti dhammaystiraya marxaladda koowaad, [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, tirada rakaabka isticmaalaya diyaaradaha by dhamaadka sanadkii hore ee Turkey, oo ay ku jiraan rakaab ah transit toos kordhay boqolkiiba hal marka la barbar dhigo sanadkii hore 8,6 210 189 million [More ...]
Wasiirka Kardemir ee Maalgashiga Deegaanka
Wasiirka Deegaanka iyo Qorshaynta Magaalooyinka Murat Kurum ayaa booqday Karabük Iron iyo Iron Works (KARDEMİR) AŞ wuxuuna baaray maalgashiga deegaanka goobta. Waxaa si wada jir ah u wehelinaya gudoomiyaha degmada Karabuk Fuat Gurel, xildhibanada Karabuk Cumhur Unal iyo Niyazi [More ...]
111 Bin 317 Rakaabka ayaa Isticmaalay Maddaarka Istanbul
Maareeyaha Guud ee Shirkadda Diyaaradaha Turkish Bilal Ekşi ayaa ku dhawaaqay in 29 kun oo qof oo rakaab ah 2018 ay ka dhoofeen garoonka diyaaradaha ee Istanbul ilaa 111 tan iyo taariikhda furitaanka, 317 October. Qoraalkiisa ayuu ku soo qoray bartiisa Twitterka Ekşi, [More ...]
TCDD wuxuu aasaasay Nidaamka Cusub ee Ankara Gar
TCDD waxay nidaam cusub ka sameysay Saldhigga Tareenka ee Ankara seddex maalmood ka dib shilkaas oo ay ku dhinteen dadka 9 oo naftooda ku waayay tareenka xawaaraha sare ku socda ee ka socda Ankara illaa Konya. Sida ku cad warbixinta Eray Görgülü ee Hürriyet, [More ...]
Mabaadii'da khatarta ee Ankara Metro
Wadada 'Ankara Subway', nidaamka korantada, iyadoo ay ugu wacan tahay burburka ololka iyo holacyada ayaa ka muuqday tareenka in muddo ah carqaladeynta awgeed. Tareenka ayaa ka dhaqaaqay Batıkent una sii jeeday Kızılay [More ...]
Turkey Konya Konya degmada Metropolitan siiyey TÜBİTAK ugu horeysay maal Science Center, sidoo kale 2018 ahaa diiradda oo dunida ka sayniska. 2018, Xarunta sayniska ee Konya, oo martigelisay kumanaan qof oo booqdayaasha 310 munaasabado badan, ayaa la furay. [More ...]
Kooxaha Barafka ee Kocaeli ee Ka Dhexeeya Wadooyinka 225 Gawaarida
Kooxaha Kocaeli ee Magaalaweynta Barafka Koofihi waxay la dhibtoonayaan baraf si ay jidadka ugu furnaadaan barafka una baabi'iyaan dhibaatooyinka suurtagalka ah ee qaybaha sare. Shaqaalaha 550 iyo 225 [More ...]